भन्दा भन्दा थाकिसक्यौ, अब सडक संघर्षको विकल्प छैन् – डा. महत « Pokharaaaja
भन्दा भन्दा थाकिसक्यौ, अब सडक संघर्षको विकल्प छैन् – डा. महत
प्रकाशित मिति : 24 June, 2020 1:43 pm
By : Samuel Shrestha
नेपाली कांग्रेसले तपाईको नेतृत्वमा कोरोना भाइरस सम्बन्धी अनुगमन समिति गठन गरेको छ । तपाईको दृष्टिमा सरकारले कसरी काम गरिरहेको पाउँनु भएको छ ?
– सरकार कसरी प्रस्तुत भइरहेको छ भनेर सम्पूर्ण जनताले देखेकै छन् । प्रधानमन्त्रीले संसदमा जसरी अभिव्यक्ति दिनु भयो, त्यसैले स्पष्ट हुन्छ कि, यो सरकार कति जिम्मेवार छ भन्ने कुरा । हाच्छिउ गरेर, बेसार खाएर कोरोना जान्छ भन्ने जस्ता गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीले संसदमै दिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । अहिलेसम्म कोभिड – १९ को उपचार छैन । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले संक्रमण भोलीका दिनमा अझ बढेर जाने र नेपाली जनताले थप कष्ट भोग्नु पर्ने स्पष्टै देखियो ।
सरकारले कोभिड – १९ को महामारी नियन्त्रणका लागि गरेको प्रयास सन्तोषजनक छैन् ?
– हामीले यसलाई निहालेर हेर्ने हो भने सरकारी प्रयास दयनिय छ । समितिले देशव्यापी रुपमा बुझ्ने र अन्तक्रिया गर्ने काम गरेको छ । कोभिडि १९ को कारण जनता अत्यन्त आतंकित छन् । कुन बेला के हुने हो भन्ने त्रास छ । उपचार र रोकथामको कुनै व्यवस्था छैन् । भगवान भरोसाको अवस्था छ । झण्डै तिन महिनाको लकडाउनमा सरकारले कुनै तयारी गरेको देखिएन । समय जति आन्तरिक सत्ता संघर्षमा बितायो । जनताको समस्या कम्युनिष्ट पार्टीका लागि कुनै मुद्धा नै रहेन । नेकपा भित्रको अन्य नेताहरुमा पनि सत्ता संघर्षको मोह मात्रै देखियो । जनताको पिरमर्का र समस्या प्रति नेकपाका नेताहरु गम्भिर देखिएनन । सरकारका गलत क्रियाकलाप र कमजोरी विरुद्ध सत्तारुढ दलका नेताहरु पनि बोलेनन् । भ्रष्टाचार विरुद्ध पनि पार्टी बोलेन । सरकारले त जनतालाई निराश बनायो नै समग्र कम्युनिष्ट पार्टीले नै जनतालाई निराश बनायो ।
सरकार र नेकपाको यो व्यवहारले त जनता झनै समस्यामा पर्ने भए नि ?
– सरकार पाँच वर्षका लागि निर्वाचित भएको छ । समय अझै बाँकी छ । तर सरकारले खासै आफ्नो समस्या समाधान गर्ने चासो पनि देखाएको छैन । चासो नदिएपछि निराशा छाउने नै भयो । भारत र अन्य मुलुकबाट लाखौं मानिसहरु फर्किएका छन् । रोजगारी गुमेको छ । उनीहरुले कमाएर बचाएको थोरै रकमबाट गाउँमा मानिसहरुको जीवन धानिएको अवस्था थियो । अब उनीहरु पनि घर फर्किएका छन् । आम्दानीको स्रोत पनि बन्द भएको अवस्था छ । यसले खाद्यान्न र आर्थिक संकट ठुलो चुनौति खडा भएको छ । वर्ष दिनलाई खान पुग्ने खाद्यान्न दुई महिनामा नै सकिने अवस्था छ । गाउँमा मात्र नभएर शहर बजारमा पनि अवस्था गम्भिर बन्दै गइरहेको छ । तर सरकार भने अर्कै दुनियाँमा छ । प्रधानमन्त्री संसदमा जसरी प्रस्तुत हुनु भयो, त्यसैबाट सरकारको अवस्था थाहा हुन्छ । जनताप्रति सरकारको चासो, चिन्ता, सम्बेदनशिलता पटक्कै देखिएको छैन् ।
यहि विचमा बजेट प्रस्तुत भयो । बजेटमा त अनेक विकासका कुराहरु आएका छन् नि ?
– अर्थमन्त्रीले साधारण खर्च धान्न सक्ने पनि राजश्व छैन भनेर सार्वजनिक रुपमै भन्नु भएको छ । उहाँले कुन पैसाले पानी जहाज र रेलको कुरा गर्नु भएको हो, मैले बुझ्न सकेको छै्रन । अहिलेको प्राथमिकतामा नै नपरेको कुराहरु बजेट विनियोजन गर्नु भनेको आफ्नो पार्टी पंक्तिलाई रिझाउन मात्रै हो भन्ने प्रष्ट देखिन्छ । विभिन्न नियुक्ति र सुविधा बढाइएको छ । सांसद विकास कोष यथावत राखिएको छ । अनावश्यक संरचनाहरु कटौति गरिएको छैन् । प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट आएका सरकारहरु मध्ये सात सालको परिर्वतन पछि पञ्चायतलाई छाड्ने हो भने इतिहासकै असम्बेदनशिल सरकारका रुपमा यो सरकार देखा परेको छ ।
विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले विभिन्न समयमा सरकारलाई सुझावहरु दिएको छ । सरकारले विपक्षी दलको सुझाव सुनेन ?
– पटक्कै सुनेन । हामीले भारतबाट नेपाल आउने नागरिकलाई सुरक्षित ढंगबाट प्रवेश दिउ भन्यौ । तर सरकारले सुनेन । सुरुमा भारतबाट आएकाहरु संक्रमित भएका थिएनन । भारतमा नै त्यतिबेला संक्रमण फैलिएको थिएन । उनीहरुलाई छेक्दा संक्रमण फैलिन पुग्यो । नेपाल आइसकेपछि पनि उनीहरुलाई छुट्याएर परिक्षण गर्ने र मापदण्ड अनुसारको क्वारेन्टीनमा राख्ने काम भएन । संक्रमणका कारण आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा परेको असरको सामना गर्ने र संक्रमण नै नियन्त्रण गर्ने दुई वटै काममा सरकार असफल भएको छ । अझ भनौं प्रयास नै गरेको छैन् ।
स्वास्थ्य सामग्री लगायतका खरिदमा पनि भ्रष्टाचारका काण्डहरु भए । यसलाई कसरी लिनु भएको छ ?
– पहिलो चरणमा स्वास्थ्य सामग्री लगायतका खरिदमा भएको भ्रष्टाचारलाई टालटुल गरियो । भ्रष्टाचारमा संलग्नहरुलाई कुनै छानविन र कारबाही नै भएन । पछिल्लो पटक सेनालाई ढाल बनाएरु जी टु जी को नाममा रक्षा मन्त्रालयले ताण्डव देखायो । त्यसको आसय पनि भ्रष्टाचार गर्नु नै हो ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनुभव र विज्ञता भएकालाई दिइएन । अर्थतन्त्र अर्थ हेर्ने विज्ञले हेर्नु पर्ने, स्वास्थ्य क्षेत्र स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञले हेर्नु पर्नेमा त्यसो गरिएन । यसको मतलव संकटको महामारीमा पनि सरकारको ध्यान भ्रष्टाचार गर्नमा नै केन्द्रीत भएको देखिन्छ ।
यी सारा समस्या र वेथिति प्रति कांग्रेसको दृष्टिकोण र भूमिका कस्तो रह्यो ?
– सुरुमा सरकारले एकद्धार प्रणालीबाट गर्छु भन्यो, हामीले ठिकै छ गर्नुस भन्यौ । हामीले सरकारी कोषमा ५० लाख जम्मा पनि ग¥यौं । कुनै कम्युनिष्ट पार्टीले कोषमा रकम जम्मा गरेनन । उहाँहरु पार्टी भनेको सरकार र सरकार भनेको पार्टी भने जस्तो गरी अघि बढ्नु भयो । कांग्रेसका साथीहरुले देशभरी सहयोग गर्न खोज्दा पनि अवरोध गरियो ।
दश अर्व खर्च भएको भनियो, त्यसमा पनि व्यापक अनियमितता भयो । सरकारमा इमान र सर्मपण देखिएन । काम गर्ने तरिका त झनै भएन । हामी अझै पनि सरकार सुध्रियोस र ठिक बाटोमा हिडोस् भन्ने चाहन्छौं ।
अब कांग्रेस प्रतिपक्षि दलका रुपमा के गर्छ ?
– हामी सरकारलाई भन्दा भन्दा थाकि सक्यौ । संसद र बाहिर पनि निरन्तर खवरदारी गरेका छौं । जिल्लाबाट र केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पनि बुझाएका छौं । अब सरकार सुध्रिने सम्भावना देखिदैन । अब यी कुराहरु लिएर संसदमा मात्र होइन सडकमा पनि उत्रिनु पर्ने अवस्था आएको छ । संक्रमणको जोखिमलाई ख्याल गरेर सामाजिक दुरी र सुरक्षा अवलम्बन गरेर सडकमै जानु पर्ने परिस्थिती निर्माण भएको छ । संक्रमणको बहानामा जनताको आवाजलाई थुनेर राख्न मिल्दैन ।
संक्रमण नियन्त्रणमा कांग्रेसको भूमिका के हुन्छ ?
– हामी सत्तामा छैनौ । त्यस हिसावले हामीसंग बजेट हुने कुरा भएन । तर पनि पार्टीका साथीहरुबाट जे सम्भव हुन्छ, आफुले भ्याएसम्म गरिरहेका छौं । संकटमा भएकाहरुलाई राहत दिएका छौं । संक्रमण विरुद्ध सचेतना फैलाउन पनि पार्टी सक्रिय भएर लागेको छ । केन्द्रदेखी स्थानिय तहका पार्टीका नेता , कार्यकर्ता, समर्थक, शुभचिन्तकहरु सबै कोरोना नियन्त्रणको अभियानमा लागि रहेका छन् । हाम्रा साथीहरुले जनमुखी भएर भेदभाव नगरी सबैलाई सहयोग पु¥याइरहेका छन् ।
संक्रमण नियन्त्रण गर्न सरकारले के काम गर्नु पर्ने देख्नु हुन्छ ?
– हामीले बुदाँगत रुपमा नै सरकारलाई सुझाव दिएका छौं । परिक्षणको संख्या बढाउनु प¥यो, क्वारेन्टीनलाई व्यवस्थीत गर्नु प¥यो । जनताको आर्थिक संकट प्रति गम्भिर हुन प¥यो । पानी जहाज र रेलका कुरा छाडेर बजेटको मोडालिटि परिर्वतन गर्नुपर्छ । संसारभरीका बजेटका मोडालिटि फेरिएका छन् । जीवन नै संकटमा भएको बेला हाम्रो ध्यान स्वास्थ्य र जीवनयापनमा केन्द्रीत हुनुपर्छ ।
कोहि पनि भोकै मर्ने अवस्था बनाउनु भएन । विदेशमा अलपत्र परेकाहरु जिम्मेवार बन्नु प¥यो । उनीहरुलाई बैदेशिक रोजगार कोष प्रयोग गरेर स्वदेश ल्याउनु प¥यो । कामका लागि खाद्यान्न जस्ता कार्यक्रम ल्याउनु प¥यो । लकडाउन आवश्यक नभएका ठाउँमा साना तथा मझौला उद्योग खोल्न दिएर रोजगारी बढाउनु प¥यो । त्यस्ता उद्योगलाई राहतको आर्थिक प्याकेज उपलब्ध गराउनु पर्छ ।
कृषि क्षेत्रलाई विकास गर्नु पर्दछ । कृषि उत्पादन बढाउनु पर्दछ । रेमिटेन्स पच्चिस प्रतिशतले घटेको छ । पर्यटन व्यवसाय २०२३ सम्म सामान्य अवस्थामा नफर्किने भनेर अन्तराष्ट्रिय अध्ययनले नै भनेको छ । विदेशी मुद्राको अभाव हुने पक्का छ । त्यसको क्षतिपूर्ति गर्न आयात घटाउनु पर्दछ । कृषि उत्पादन बढाउने, पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाएर विद्युत उपभोगमा प्रोत्साहन गर्ने जस्ता कार्यक्रम ल्याउनु पर्दछ । ग्रिन इकोनोमीलाई बढाउनु पर्दछ ।
एउटा फरक प्रशंग, अहिले कोभिड– १९ को महामारी छ । पार्टीको महाधिवेशन कहिले र कसरी होला ?
– यो विषय पार्टीका नेताहरु विच पनि बैठकमा उठेको थियो । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा कुनै पनि हिसावले कार्यकाल लम्बाउने विचारमा हुनुहुन्न । उहाँले यो कुरा स्पष्ट भन्नु पनि भएको छ । सम्भव छ भने उहाँ फागुन मै महाधिवेशन गर्न तयार हुनुहुन्छ । तर कार्य तालिका प्रभावित भएको छ । संक्रमण नाटकिय ढंगबाट घट्ने अवस्था देखिदैन । पार्टी नेतृत्व बसेर समग्र मुल्यांकन गरेर निष्कर्षको आधारमा महाधिवेशन हुन्छ । जहाँसम्म पार्टी सभापति र अन्य पदाधिकारीको कुरा छ, कार्यकाल बढाउ भन्ने मनसाय छैन् । सामुहिक निष्र्कषबाट अघि बढ्ने हो ।
Rastrapukar बाट साभार
उपनिर्वाचन काण्ड गर्ने लाई हाेइन निष्ठावान कांग्रेस उम्मेदवार खेमराज गुरूकाे पक्षमा जान्छ
सिरिन्ज आक्रमण भनी मिडियामा गलत सन्देश फैलाइयो
पोखरा ( महानगरीय प्रहरी परिषद काठमाण्डौँका प्रहरी उपरीक्षक अशोक सिंहसँग पोखरा आजले लिएको अन्तरवार्ता) अहिले
हामीले भौतिक मात्र नभई सबै पक्षको विकास गरेका छौँः वडाध्यक्ष आचार्य
(पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १६ का वडाध्यक्ष जीवन प्रसाद आचार्यसँग पोखरा आजले लिएको अन्तरवार्ता) पोखरा
‘यो सरकार कुनै हालतमा संविधानको पक्षधर होइन’
(अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष युवराज कुँवरसँग पोखरा आजले लिएको अन्तरवार्ता) पोखरा निर्वाचन अगाडि गाउँपालिकालाई परिवर्तन गर्ने,
India reports 42,625 new COVID-19 cases in last 24 hours
Pokhara India on Wednesday reported 42,625 new COVID-19 cases, 36,668 recoveries, and 562 deaths in
श्रीमतिले हनी सिंहविरुद्ध दिइन् घरेलु हिंसाको उजुरी
पोखरा बलिउडमा आफ्नो गीतका लागि लोकप्रिय पञ्जाबी गायक यो यो हनी सिंहविरुद्ध उनकी पत्नी शालिनी
Government needs all-side support to deal with Darchula incident: Gagan Thapa
Pokhara Nepali Congress (NC) leader Gagan Kumar Thapa has said the government needs support from